Warshadaha Soosaarayaasha, Shirkadaha - Soosaarayaasha Soosaarka Shiinaha
Waxaan ka caawinnaa adduunka inuu korayo illaa 1988
Wac Taageer 86-591-83669891
Taageero emayl ah sales@foenalu.com
Taariikhda Aluminiumka Dhismaha
Taariikhda Aluminiumka Warshadaha
Profile Aluminium Nidaamka daaqada iyo darbiga daahyada
Nidaamka Daaqadda Aluminiinka
Daaqadda Aluminium Kiiska
Daaqadda Isku-dhafka ah iyo Miskaha
Nidaamka Aluminium Albaabka
Aluminium Caseal Albaabka
Aluminium laabti Albaabka
Albaabada Slide Aluminium
Habka Solar Rack
Xal u helista Dhulka
Xalinta dusha sare
Nidaamyada Nidaamka Kala-reebista ee 'PVD' ee 'Ground Mounted' waxaa si gaar ah loogu talagalay tas-hiilaadka waaweyn ee ganacsiga iyo tas-hiilaadka dadweynaha. Qiimaha shaqada iyo waqtiga rakibida waa la dhimi karaa sababtuna tahay taageerada horey loo soo abaabulay.
Nidaamka Fidinta Guryaha Cagaaran (xalka dabiiciga ee qorraxda) wuxuu si buuxda uga faa'ideysanayaa dhul beereedyada wuxuuna horumar ku sameeyaa tamarta nadiifka ah ee qorraxda, taasoo mustaqbal nadiif ah u keena aadanaha.
Xalinta Carbin-ka-Xireynta Carport-ka ee loo yaqaan 'Solar panels' waxaa loo isticmaali karaa saldhigga dallaca si toos ah loogu talagalay gawaarida korantada mar haddii si fiican ugu xiran khaanadda korantada.
Marka la barbar dhigo carport dhaqameedka, Qaab dhismeedka gudaha ee la habeeyay ee kaarboorigga biyaha ee FOEN wuxuu suurtogal ka dhigayaa inuu horseedo, ururiyo ugana soo baxo roobka nidaamka biyo-xidheenka, gaarista biyo-dhismeedka qaab-dhismeedka iyo ilaalinta xariifnimada gudaha gudaheeda. Intaa waxaa sii dheer, wadajirka aan gashaneyn ee xarkaha biyaha ayaa lagu ridi karaa oo loo kala diri karaa si isdaba joog ah, sidaas darteedna loo yareeyay culeyska shaqada goobta.
Nidaamka Fidida Qorraxda ee Tile Roof waxaa si gaar ah loogu habeeyay rakibaadda kuleylka saqafka sare ee guryaha iyo ganacsiga labadaba.
FOEN Ground Screw waa nooca aasaaska cusub ee nidaamka dusha dhulka. Codsigan si balaadhan ayaa loogu dabaqay si loo horumariyo mashaariicda qorraxda ee dhulka. Iyada oo ay ugu wacan tahay qaabeynteeda gaarka ah iyo tayada waara, FOEN Ground Screws waxay xaqiijineysaa macaamiisha fududeynta & Deg-degga ah ee leh tayo sare.
Nidaamka dhismaha Aluminium ee FOEN, wuxuu bixiyaa Solar Frame Aluminium oo tayo sare leh, halkan waad ku caamili kartaa qiimaha tartanka. Xaqiijinta tayada!
3Qarqadaha Gaarka ah iyo Kiisaska Isku Darka Window
Aaladaha aluminiumka ku shaqeeya ee alwaax laga soo qaatay waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa daaqadaha iyo albaabada. Qalabka dhismaha ugu fiican. Waxaad ku astayn kartaa astaamaha aluminiumka gaaska ah FOEN qiimo ka hooseeya qiimaha asaaga ah.
Alaabooyinkeena aluminiumka aluminiumka ah ayaa lagu iibiyaa adduunka oo dhan.
Daaqadaha kiimikada aluminium ee kor u qaadaya awooda cimilada aluminiumka iyada oo loo marayo habka lagu buufiyo firfircoonaanta, Nidaamka lagu buufiyo budada budada ah ee dusha aluminiumka ah, Ilaalinta deegaanka, caafimaadka, taabashada raaxada leh, Kordhinta caarada aluminiumka caabiga, iska caabin qabowga iyo caabbinta aashitada, iska caabbinta jawiga cimilada ee sii xumaanaya.
Daboolida ama ku dhalaal dhalaalaysa leh sifooyin indhaha ah oo si cad u muuqda qaar ka mid ah mawjadaha tamarta oo ka tarjumaya kuwa kale. Dharka xulashada caadiga ah ee muuqaalka leh ayaa si cad u muuqda iftiinka muuqda waxayna ka tarjumayaan mowjad-mowjadaha-gaaban iyo shucaaca-fog ee shucaaca.
• Cudur iska caabin ah Rw ilaa 48 dB
• Dabayl iyo biyo-cabbir illaa 1000 Pa (waxay kuxirantahay naqshadaynta)
• Tuugag ka soo horjeedka tuugada
• Difaaca kuleylka sareeya (waxay kuxirantahay qaabeynta)
• Cabbirrada glazing gaarka ah ee u dhexeeya 6 illaa 50 mm
• Miisaanka dhalada sare ilaa 500 kg
• Eeg ballaca 60 mm
• Koofiyo dabool kala duwan oo banaanka ah
• Midab gudaha iyo dibedda ah hadba sida la doonayo
Taariikhda daaqada Aluminum alwaax laga sameeyay
FOEN Group hadda waa shirkad balaaran oo balaaran, kuna takhasustay cilmi baarista & hormarinta, wax soosaarka iyo iibinta sidoo kale iibinta muuqaalka aluminium, nidaamka daaqada, nidaamka qorraxda, qaab dhismeedka aluminiumka, tuubooyinka birta ee birta ka sameysan iyo alaabada darbiga daahyada. in ka badan 50 set oo ah qalabka wax lagu farsameeyo ee CNC, Awooddeena wax soo saarka ee sannadlaha ah wax ka badan shan iyo toban kun oo gogo 'taas oo ka dhigeysa qaabeynta cusub mid sii dabacsan oo dhaqso leh.
Koofiyadaha daaqadaha budada ah ee sifooyinka aluminium
Waxaan leenahay koox R&D xirfadle ah oo naqshadeeya qaybo gaar ah oo loogu talagalay baahiyada baabi'intaada, waxaanna haysannaa waxyaabo badan oo loo-diyaariyey oo badbaadin kara qiimahaaga iyo waqtigaaga. Waxaan bixinaa adeegga ODM / OEM, CAD Sawirista iyo sicirka naqshadda naqshadeynta saamigaaga muunaddaada. 10-15 Maalmood soo-saarista caaryada iyo tijaabada muunadda, oo ay kujirto qiimahoodu caaryada. Tijaabada caaryada iyo xaqiijinta muunad kahor soosaarka tirada badan.
123456 Xiga> >> Bogga 1/7
Xirfad ahaanta u noqo maxaa yeelay ka go'an, na doorta, doorta khibrad adeeg oo kala duwan. Shirkaddayada waa adeeg bixiyaha xalka isku dhafan ee R&D, nashqadeynta, soosaarka iyo adeegyada suuqgeynta.
(Diiradda saar FOEN) Badbaadada albaabada iyo W ...
Quruxda hal abuurka, Isbedelka cusub ee ...
Khariidadda muuqaalka jirka